07:55:33 am 13-May-2021
यौन सम्बन्ध राख्नु भन्दा पहिला या यौन सम्बन्ध राख्ने वित्तिकै अनियन्त्रित रूपले वीर्य स्खलित हुनुलाई शीघ्रपतन भनिन्छ । शीघ्रपतन कुनै किसिमको रोग हैन । तर यदि यो समस्या लामो समय सम्म रह्यो भने यसले तपाईंको जीवनमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
शीघ्रपतनको कारण एक तर्फ तपाईंको जीवनमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ भने अर्कोतिर तपाईंको जीवन साथीसँगको सम्बन्धमा खराब असर पनि पर्न सक्छ । धेरै व्यक्ति यो समस्या रोक्नको लागि डक्टरी औषधी प्रयोग गर्छन् । औषधीको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ त्यसैले यसको घरेलु उपाचारको बारेमा जानकारी ।
शीघ्रपतन हुने कारणहरू
१. शरीरमा अधिक मात्रामा वीर्य या रक्त बन्नु
२. शरीरमा वीर्यको मात्रा कम हुनु
३. शारीरिक र मानसिक बीमारी या कमजोरी
४. वीर्य नलीमा ढिलोपन या सुस्ती आउनु
५. शरीरमा टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको कमी हुनु
६. नशालु चिजको अधिक प्रयोग गर्नु
७. मुत्रमार्ग या प्रोटेस्टमा संक्रमण हुनु या सुन्निनु
८. वीर्य वर्धक औषधीको प्रयोग गर्नु
९. मधुमेहको रोगमा
१०.अधिक मानसिक तनावमा हुँदा
११. वंशानुगत गुण
शीघ्रपतनको घरेलु उपचार
अदुवा– अदुवा शिघ्रपतनको उपचारको लागि अचूक घरेलु औषधी हो । यसको सेवनले लिङ्गमा रक्त सन्चार तेजले बढ्छ । जसको कारण शिघ्र पतनको समस्यालाई केही हद सम्म रोक्न सकिन्छ । दैनिक राती सुत्नु भन्दा अघि महमा एक चम्चा अदुवाको पेस्ट मिलाएर चाट्नुस् । केही समय सम्म यसो गर्नाले तपाईं यो समस्या कन्ट्रोल हुनेछ ।
प्याज– प्याजको सेवन सबै प्रकारको यौन समस्याको इलाजमा असरदार मानिन्छ । प्याज हर कोहीको घरमा सजिलै पाउन सकिन्छ । घरमा पाइने सामान्य प्याजको साथै हरियो प्याज पनि शिघ्रपतनको लागि एक राम्रो उपचार हो ।
प्याजको बिउमा कामोत्तेजना गराउने गुण पाइन्छ जसको कारणले यो शिघ्रपतनको समस्याबाट मुक्त बनाउनमा सहायक हुन्छ । खाना खानु भन्दा अघि दिनहुँ दिनमा तीन पटक एक गीलास पानीमा प्याजको विउको पाउडर मिलाएर खानाले केही दिनमै शिघ्रपतनको समस्याबाट छुटकारा मिल्छ ।